Jinhua Duduzani VEHICLE.CO., LTD kuyinto Inkampani Ungaphila Ncika futhi Akhiwe Jinhua, Isifundazwe Zhejiang, China, okuyinto usekela imigomo yayo ukuthuthwa oluhlaza futhi amandla okusindisa futhi kanjalo anikeze abantu bephilile futhi ukhululekile Ukugibela umuzwa. Le nkampani ikakhulu ukhiqiza ukuthengisa izinhlobo ezahlukene e-emabhayisikili, angahlali Scooters, izihlalo zabakhubazekile kagesi njll
Kususelwa ukuthuthukiswa & ukukhiqizwa umthamo wethu, esiqinile ukulawula izinga uhlelo, futhi nakho ocebile ukukhipha ezimakethe ezahlukene. Siyazi ukuthi ukunikela umkhiqizo omuhle futhi service enhle ukuze abangenisa nabasabalalisi emhlabeni wonke. OEM / ODM futhi abanye inkonzo ngokwezifiso iyatholakala. Futhi singathola ukunikeza iseluleko ofanelekayo kumakhasimende amasha uma kunesidingo.
Jinhua Duduzani VEHICLE.CO., LTD njalo ngifuna abalingani ebhizinisini nomaphi emhlabeni lapho ukhona. Nge Certifications ka EN15194, CE, UL, RoHS atholakale akuvumele ukungenisa kalula eYurophu noma ezindaweni zonke lapho ukhona.
Jinhua Duduzani VEHICLE.CO., LTD ukwamukela wena nabasebenzi ezikhethekile kakhulu, zonke abanolwazi ocebile emkhakheni emabhayisikili kagesi Mobility Scooters.